२०७७ कात्तिक १६ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
प्रस, गरुडा, १५ कात्तिक/ सर्लाहीको एउटा स्थानीय तहमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक सङ्ख्या अत्यन्त न्यून हुँदा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा गम्भीर प्रभाव परेको पाइएको छ। रामनगर गाउँपालिकामा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या दश हजारभन्दा बढी रहेको भएपनि ४२ जना शिक्षक मात्र रहेको शिक्षा शाखा संयोजक रामपवित्र साहले जानकारी गराएका छन्। गाउँपालिकामा दुईवटा माध्यमिक विद्यालय रहेका छन् तर स्थायी शिक्षक दरबन्दी एउटा पनि छैन। चारवटा राहत दरबन्दीको भरमा दुईवटा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालित छन्। यसैगरी, गापामा तीनवटा निम्न माध्यमिक तहका विद्यालयमा दुई राहत र चार स्थायी दरबन्दी गरी जम्मा छ दरबन्दीमा शिक्षक कार्यरत छन्। गापाभित्र ११ वटा प्राथमिक विद्यालयमा ३२ जना शिक्षक कार्यरत छन्। गापामा प्राथमिक तहका आठ दरबन्दी रिक्त रहेको शिक्षा संयोजक साहको भनाइ छ। विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको चाप अत्यधिक रहेको तथा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात नमिलेकाले एकातिर कक्षा व्यवस्थापनमा समस्या भएको र अर्कोतिर शिक्षण–सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन नपाउँदा गुणस्तरीय शिक्षाबाट बालबालिका वञ्चित हुनुपरेको
प्रस, वीरगंज, १५ कात्तिक/ नारायणी अस्पताल वीरगंजको प्रयोगशालाले शनिवार पर्सा र बारामा २१ जना सङ्क्रमित पुष्टि गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार श्रीवास्तवले प्रयोगशालामा १९५ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएकोमा पर्सामा ५ जना र बारामा १६ जना सङ्क्रमित पुष्टि भएको बताए। उनले पर्सामा वीरगंज महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका चारजना र पटेर्वासुगौलीका एकजना गरी पाँचजना सङ्क्रमित पुष्टि भएको बताए। यसैबीच, बारा निजगढका ६२ वर्षीय सङ्क्रमितको आज बिहान नेशनल मेडिकल कलेजमा निधन भएको छ। योसमेत बारामा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १९ पुगेको छ।
एकता नभएर पर्सामा कुर्मी पछाडि –अगुवाहरू
प्रस, वीरगंज, १५ कात्तिक/ कुर्मी सशक्तीकरण मञ्च पर्साको आयोजनामा दीपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा शनिवार शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। रामगढवास्थित कुर्मी धर्मशालामा आयोजित कार्यक्रममा कुर्मी समुदायका अगुवाहरूले समाजमा बढ्दै गरेका कुरीतिविरुद्ध एकजुट भई अगाडि बढ्न आग्रह गरे। उनीहरूले दाइजोप्रथा नहटेसम्म समाजको विकास नहुने ठोकुवा गरे। वक्ताहरूले कुर्मी समाज आपसी मतभेदका कारण जिल्लामा सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेर पनि पछाडि परेको बताए। उनीहरूले जनमतको आधारमा कुर्मी समुदाय पर्साको राजनीतिमा अग्रपङ्क्तिमा हुनुपर्नेमा आपसी मतभेदको कारण पछाडि परेको बताए। कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष सदानन्द कुर्मी, समाजका अगुवाहरू रामरूप कुर्मी, रामनारायण कुर्मी, सुरेन्द्र कुर्मी, प्रेमबाबू पटेल, शिव पटेल, शिवशङ्करप्रसाद पटेल, सन्तोष पटेल, श्याम पटेललगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। कुर्मी सशक्तीकरण समाज पर्साका अध्यक्ष विश्वेश्वरप्रसाद कुर्मीको अध्यक्ष्Fतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण पन्नालाल पटेलले गरेका थिए।
१७ महिलासहित १६४ जनाद्वारा रक्तदान
प्रस, वीरगंज, १५ कात्तिक/ पर्सा जिल्लामा शनिवार दुई स्थानमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा १७ जना महिलासहित १६४ जनाले रक्तदान गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्राविधिक प्रमुख सौरभराज पाण्डेले बताए। वीरगंज महानगर–१४ प्रकाशनगरमा ओम शिव बजत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा १५ महिलासहित १३० जनाले रक्तदान गरेको ब्लोदान पर्साका सहसचिव उमेश गुप्ताले बताए। गीतादेवी, कलावती देवी, रूपा तिवारी, लक्ष्मी साह, ऐलिजा न्यौपाने, रेजिना पुलामी, मुकेश पटेल, अरबिन्द साह, अनिल साह, सुरेन्द्र पटेललगायतले रक्तदान गरेका थिए। यसैगरी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भौराटाड उपशाखाले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा दुईजना महिलासहित ३४ जनाले रक्तदान गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्राविधिक जीतेन्द्र कुशवाहाले बताए। कार्यक्रममा सायरा खातुन, मधुबाला कुमारी, अशोक कुशवाहा, प्रदीप साह तेली, धर्मराज कुशवाहालगायतले रक्तदान गरेको प्राविधिक कुशवाहाले बताए।
तराई–मधेसबाट हिमालको दृश्य छर्लङ्ग देखियो
प्रस, निजगढ, १५ कात्तिक/ अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्ष कात्तिक आधा बित्दा पनि तराई–मधेसमा एकाबिहानै टन्टलापुर घाम झुल्किने गरेको छ भने दिउँसो निकै गर्मी हुने गरेको छ। आकाश खुल्ला भएसँगै शनिवार एकाबिहानैदेखि बाराको निजगढ, पिलुवा, बडर्हवा, डुमरवाना, कोल्हवी, सदरमुकाम कलैयालगायत जिल्लाका दक्षिणी भेगका बस्तीहरूबाट हिमाल टल्किएको देख्न पाएपछि तराई–मधेसवासीहरूमा एक किसिमको खुशी छाएको छ। वसन्त ऋतु पार भई शरद ऋतुको आगमन अर्थात् गर्मी महीना अन्त भई जाडो महीना शुरू हुने बेला मौसम सफा भएको बखत वर्षमा प्रायः एक/दुई पटक मात्र यहाँबाट हिमाल देखिने गरेको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१८ बडर्हवाका शिव खड्काले बताए। यहाँबाट गौरीशङ्कर हिमाल, अन्नपूर्ण हिमाल, धौलागिरि हिमालको दृश्य र कहिले अन्य हिमालका चुचुरोसमेत निकै मनमोहक देखिने गरेको उनले बताए। तराई–मधेसको समथर भूमिबाट उत्तरतर्फ रहेको तराईको चारकोसे घना वनजङ्गल क्षेत्र, विश्वको कान्छो पहाड चुरे शृङ्खला पर्वत, महाभारत पहाड पर्वतपछि हिमाल प्रस्ट देखिंदा जोकोहीको मन पनि लोभ्याउने गरेको छ। यसरी हिमाल देखेपछि वीरगंज, कलैया हँुदै पिलुवा, निजगढ आ
सालको काठ, साइकल बरामद
प्रस, पर्सागढी, १५ कात्तिक/ प्रहरी चौकी बिरुवागुठीले एक थान सालको गोलिया काठ र साइकल बरामद गरेको छ। पर्सागढी नपा–३ प्लटिङनजीकैबाट प्रहरीले साइकल र गोलिया काठ बरामद गरे पनि तस्कर भाग्न सफल भएको प्रहरी चौकी बिरुवागुठीले जनाएको छ। राष्ट्रिय वनबाट काठ चोरी गरी ल्याउने क्रममा काठ र साइकल बरामद भएको हो।
हाजीरीजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न
प्रस, सेढवा, १५ कात्तिक/ जीराभवानी गाउँपालिकामा हाजीरीजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। बौद्धिक क्षमता अभिवृद्धि, वृहत् ज्ञानमाला कार्यक्रम अन्तर्गत नेरा मावि सेढवा बिर्तामा आयोजना गरिएको हाजीरीजवाफ प्रतियोगितामा ठोरीका दिनेश लामा, सनिला दोङ्ग र अशोक लामा प्रथम भए। यसैगरी, दीपककुमार पटेल र धामू राम द्वितीय भए भने आशिष यादव, मेलिना बस्नेत र सरोज विश्वकर्मा तृतीय भए। हाजीरीजवाफ प्रतियोगितामा जीराभवानी, ठोरी, जगरनाथपुर र पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाबाट १८ वटा समूहले भाग लिएका थिए। प्रतियोगिताका विजयीहरूलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जीराभवानी गापाका अध्यक्ष्F रामप्रीत महतोले पुरस्कृत गरेका थिए। ज्ञानकुमार प्रसादको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष उषादेवी थरुनी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवचन्द्र ठाकुर, वडाध्यक्ष महादेव महतो थारू, नेपाल शिक्षक महासङ्घ जीराभवानीका अध्यक्ष्F कृपासिन्धु पटवारी, शिक्षक सङ्गठनका प्रदेश सदस्य श्रीकान्ति देवी, नन्दकिशोर साह, शिक्षक पूर्वा लामालगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। प्रतियोगिताको सहजीकरण धर्मेन्द्र पासवान, रवि चौधरी र अशोक मेहताले गरेक
प्रहरी कार्यालयमा यातना दिएको आरोप
प्रस, वीरगंज, १५ कात्तिक/ वीरगंज महानगरपालिका–२७ उदयपुरघुर्मी निवासी ४५ वर्षीय भुलाइ यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर चरम यातना दिएको उनका भाइ रोशन यादवले आरोप लगाएका छन्। गएराति प्रहरीले दाइलाई पक्राउ गरेको र चरम यातना दिएको कारण उनको उपचार अहिले नारायणी अस्पतालमा भइरहेको रोशनले बताए। पाँच दिनअगाडि भुलाइ यादवकी बुहारी लालसा देवी र छिमेकी धुरी यादवका परिवारबीच घास काट्ने विषयलाई लिएर झगडा भएको थियो। सो क्रममा लालसा देवीको हात भाँचिएको र उनको उपचार पनि नारायणी अस्पतालमा भइरहेको छ। झगडाको कसूरमा प्रहरीले धुरी यादवका छोरा बलिराम यादवलाई पनि पक्राउ गरेको छ। यसैबीच, प्रहरीले शुक्रवार राति भुलाई यादवलाई पक्राउ गरेको र अपराध शाखामा चरम यातना दिएको उनका भाइ रोशन यादवले आरोप लगाए। उनले आफू अपराध शाखामा दाइलाई भेट्न जाँदा हातखुट्टा बाँधेर प्लास्टिकको पाइपले कुटेको दाबी गरे। दाइलाई आफ्नै आँखाअगाडि कुटेको प्रतीकलाई उनले बताए। प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता मनोजीत कुँवरले सामान्य सोधपूछको लागि यादवलाई बोलाएको र उनलाई कुटपिट नगरेको दाबी गरेका छन्। प्रवक्ता कुँवरले यादव
प्रस, वीरगंज, १५ कात्तिक/ सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय पर्साले आदर्शनगर क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य शुरू गरेको छ। आदर्शनगरमा पाँच किलोमिटर लामो सडक, नाला, फूटपाथ तथा रेलिङ निर्माण कार्य गरिरहेको सो कार्यालयले दशैंअगावै काम बन्द गरेकोमा शनिवारबाट शुरू गरेको हो। भाजुरत्न चोकदेखि लोहारपट्टी र माईस्थान चोकदेखि आन्तरिक राजस्व कार्यालयसम्म कालोपत्र निर्माण कार्य आजदेखि शुरू भएको ग्रीनसिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र आदर्शनगरका अध्यक्ष्F प्रकाश खेतानले बताए।
सितेरियो खेलाडीको बेल्ट टेस्ट कार्यक्रम
प्रस, परवानीपुर, १५ कात्तिक/ जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका –७ जीतपुरस्थित नेपाल सितेरियो कराँते सङ्घ डोजो जीतपुर शाखाले बेल्ट टेस्ट कार्यक्रम गरेको छ। नेपाल सितेरियो कराँते खेल्दै आएकाहरूको बेल्ट टेस्ट गरी बेल्ट उन्नति गरेकाले शनिवार बेल्ट टेस्ट कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। जीतपुर डोजो शाखाका सहप्रशिक्षक मनोजकुमार साहको अध्यक्षता र पूर्व युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोतम पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री पौडेलले खेलले स्वास्थ्यका साथै सद्भाव बढाउन योगदान पु–याउने दाबी गरे । उनले जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई खेल क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे। कार्यक्रममा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकी उपप्रमुख सरस्वतीदेवी चौधरीले खेलको विकासमा नगरपालिका सधैं अग्रस्थानमा उभिने बताइन्। कार्यक्रममा गायक प्रमोद जख्मीले गीत प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए भने प्रीति पासवानले नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा नेकपा बारा जिल्ला अध्यक्ष क्षत्रबहादुर श्रेष्ठ (अनिल), देवनारायण चौधरी, जीतपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सञ्जय साह, नगर
मनवा र दरदरवा क्रिकेट क्लब विजयी
प्रस, पर्सागढी, १५ कात्तिक/ पर्सागढी नगरपालिकामा जारी नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिवार भएको खेलमा मनवा क्रिकेट क्लबले आयोजक टीम युथ युवा क्लब बर्वाछोटैलीलाई ८ रनअन्तरले पराजित गरेको छ। पर्सागढी नपास्थित नेरामावि बर्वाछोटैलीको खेल मैदानमा आज टस जिती रोजीमनवा क्रिकेट क्लबले पहिले ब्याटिङ गरेको थियो। निर्धारित ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ९२ रन बनाएको रोजीमनवा किक्रेट क्लबले आयोजक टीम युथ युवा क्लब बर्वाछोटैलीलाई ८४ रनमा सीमित गरेको थियो। यस खेलको ‘म्यान अफ द म्याच’ रोजीमनवाका अकरम हुसैन घोषित भए। आज भएको दोस्रो खेलमा दरदरवा क्रिकेट क्लबले निर्धारित ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १३४ रन बनाएको थियो। प्रतिउत्तरमा जसौली क्रिकेट क्लब ६६ रनमा सीमित भयो। दोस्रो खेल दरदरवाले ६८ रनअन्तरले जीत हासिल ग–यो। दोस्रो खेलको ‘म्यान आफ द म्याच’ दरदरवा क्रिकेट क्लबका कप्तान सबी सहनी घोषित भए।
वीरगंजमा कन्डम दिवस मनाइयो
प्रस, वीरगंज, १५ कात्तिक/ २६औं राष्ट्रिय कन्डम दिवस वीरगंजमा मनाइएको छ। ‘दोहोरो सुरक्षाका लागि कन्डमको पहँुच बढाऔं’ भन्ने नाराका साथ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्साको आयोजनामा विद्यार्थी जागरण मञ्च, आराधना समाज, सहयात्री समाज, नीता फाउन्डेशन, बारा प्लस, वीरगंज महानगरपालिका तथा स्वास्थ्य कार्यालयको सहकार्यमा घण्टाघरमा कार्यक्रम भएको थियो। ब्यानर र प्लेकार्डसहित घण्टाघरमा स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर कार्यक्रम गरिएको थियो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्साका कार्यालय प्रमुख उदयराज शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आराधना समाजका अवधेश साह र वीरगंज महानगर स्वास्थ्य महाशाखाका स्वास्थ्य निरीक्षक सुमनचन्द्र ठाकुरले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण विजामका नीरज साहले गरेका थिए। प्रस, रौतहट/ नीलहीरा समाज रौतहटले २६औं राष्ट्रिय कन्डम दिवसको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्लामा एचआइभीको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ। सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा नीलहीरा समाज रौतहटले एचआइभी रोकथामको लागि काम गरिरहेको संयोजक जिना राणाले बताइन्। उनले रौतहटमा २१४ जना सङ्क्रमित रहेको र १९१ जन
नेकाको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम
प्रस, परवानीपुर, १५ कात्तिक/ नेपाली काङ्ग्रेस बाराले शुक्रवार र शनिवार बाराको परवानीपुर विश्रामपुरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गरेको छ। नेकाले शनिवार विश्रामपुर गाउँपालिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रम सुनील गुप्ता, बृजलाल यादव, लोकेश सिंह, जगदीश साह, जयनारायण यादव, किशोरी साह, सुरेन्द्र गुप्ता, मदन यादव, भोला गुप्तालगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस गाउँपालिका सभापति जगदीश यादवको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो। यसअघि शुक्रवार बाराको परवानीपुर गाउँपालिका–३ मा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुनील गुप्ताले चाडपर्व स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मनाउन आग्रह गरे। कार्यक्रममा नेता लोकेश सिंह, जगदीश साह, जयनारायण यादव, विजय गुप्ता, लालबाबू यादव, राजकिशोर गुप्ता, प्रमोद सिहंलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
अध्यात्मले सत्य ग्रहण गर्न सक्तैन
शीतल गिरी प्रत्येक विचार–पद्धतिले आआफ्नो समयका प्रवृत्तिहरू धारण गर्छन् र त्यसलाई प्रकट गर्छन्। तसर्थ यसलाई सहीरूपमा तब बुझ्न सकिन्छ, जब हामी त्यस दृष्टिकोणलाई पहिले ग्रहण गरौं, जसबाट संसारको व्याख्या गर्न, साथै त्यो स्वाभाविक प्रेरणा पनि बुझ्ने प्रयत्न गरौं, जसको कारण उक्त विचार–पद्धति सम्भव हुन पनि सक्यो। बुद्धको जन्म भएको समयमा आर्यभूमिमा कसैको पनि एकछत्र साम्राज्य थिएन तर खास–खास गणजातिहरू र गोत्रहरूको शासक राजाहरू भने थिए, जो आफ्ना छुट्टै ससाना राज्य निर्माण गर्न प्रयत्नतरत रहन्थे। विभिन्न स्थानीय भाषाहरूको प्रयोग हुन्थ्यो र संस्कृतले सामान्यतः पवित्र भाषाको मान्यता पाएको थियो। साथै वेदले रहस्यमय पवित्र ग्रन्थको रूपमा मान्यता पाइसकेको थियो। त्यस समयमा पौरस्त्यका प्रसिद्ध ६ दार्शनिक सम्प्रदायहरूको पूर्ण विकास भइसकेको थिएन, यद्यपि त्यस किसिमको कल्पनाको भाव जसको कारण उक्त दर्शन पद्धतिहरूको रचना पछि गएर सम्भव हुन सक्यो, त्यस समयमा आफ्नो कार्य भने गरिरहेको थियो। त्यस समय सम्पूर्ण वातावरण परस्पर–विरोधी मन्तव्यहरू र कल्पनाहरूको एउटा शशीभूत पुञ्जले परिपूर्ण थियो, जसलाई एउटाले अङ्गीकार
ओमप्रकाश खनाल पर्साको विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकाका नेकपा कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको अन्तरदलीय मुठभेडमा मृत्यु भयो। यो हत्यामा पर्साबाटै तत्कालीन संविधानसभामा निर्वाचित नेतासहित १२ जना मुछिएका छन्। उनीहरूविरुद्ध सरकारी वकीलमार्फत् उजूरी दायर भएपछि हत्याको सातापछि चौरसियाको अन्त्येष्टि भएको छ। यो प्रकरणमा पर्सा प्रहरीको भूमिका सन्देहजनक मात्र भएन, हत्याको योजनाकार भनिएका व्यक्तिको नाम हटाएर ल्याए मात्र जाहेरी दर्ता गर्ने अडान लियो। अनुसन्धानको दायराबाट ती व्यक्तिको नाम हटाउन प्रहरीलाई राज्य सञ्चालनको अति उच्च तहबाट दबाब आएको चर्चा मात्र भएन, वीरगंजमा त्यसको विरोधमा दिनहुँ प्रदर्शन भयो। यतिसम्म कि हत्या प्रकरणमा सत्तासीन नेकपाको स्थानीयदेखि केन्द्रीय राजनीति दुई खेमामा प्रस्ट प्रकट भयो। प्रकारान्तरले हत्यामा संलग्नताको आरोप लागेकाहरूविरुद्ध उजूरी दर्ता भइसकेको छ। घटनाको छानबीन र दोषीलाई कानूनी कारबाही न्यायिक निरूपणको पाटो हो। अहिलेका लागि न्यायमा आशावादी बन्नैपर्ने हुन्छ। तर हत्यामा नाम मुछिएका व्यक्तिलाई अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिन जुन तरीकाले राज्यशक्तिको दुरुपयोग भयो, त्यो भने अ
राजेश मिश्र पर्साको विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा नेकपाको शपथग्रहण कार्यक्रममा भएको झडपमा घाइतेहरूमध्ये मुकेश चौरसियाको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। सञ्चारमाध्यममा दिनहँु यही खबरले प्राथमिकता पाइरहेको छ। यो प्रकरण राष्ट्रियस्तरमा चर्चाको विषय बनेको छ। दलभित्रको गुटबन्दी दुई धारमा विभाजित रहेको अदृश्य स्थिति यस घटनापछि छर्लङ्ग भएको छ। एक हप्ताको विरोधपश्चात् अन्ततः मुद्दा दर्ता प्रक्रिया टुङ्गो लाग्यो र बिहीवार दर्ता पनि भयो। यसभन्दाअघि बलात्कारजन्य घटना, तेजाब प्रहार प्रकरण र हत्यालगायतका थुप्रै घटना न्यायको पर्खाइमा रहेको अवस्था छ। यसर्थ केन्द्रीय शासनमा रहेको सत्तारूढ दलसँग सम्बन्धित यस घटनाको हस्तक्षेपरहित छानबीन र कार्यवाही सर्वत्र चासोको विषय हुनु स्वाभाविक नै हो। दुई फरक सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दल दुई वर्षअघि एकापसमा समाहित त भए तर नून–पानीको मिश्रणझैं ‘क्षारीय घोल’को रूपमा रहेको छ भन्ने कुरा विभिन्न परिदृश्यले देखाउँछ। जाहेरीमा रहेको एक नामको कारण दलगत विभाजन प्रकट भएको छ। सामान्य कार्यकर्तादेखि शीर्षस्थसम्म दुई कित्तामा उभिएका छन् भन्ने अवस्था स्पष्ट छ। व्यक्तिवादी नजदीकीक
२०७७ कात्तिक १५ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
कोरोनाको डर पन्छाउँदै वीरगंजमा निजी विद्यालयहरू सञ्चालन भएका छन्। यो राम्रो यस कारणले हो कि मानिस कहिले पनि समस्याबाट आत्तिएर भागेको छैन, उसले समस्याको सामना गरेर जति क्षति बेहोरेपनि आफ्नो भविष्य बनाएको छ। आदिकालदेखि वा भनौं मानिस अस्तित्वमा आएदेखि नैस जब उसमा ज्ञान थिएन, समझ थिएन, तर्कशक्ति थिएन, समस्याहरूको सामना गर्दै आएको छ। बिस्तारै समस्याहरूसँग जुझ्न सिक्दै गयो, अनि निराकरण गर्न सिक्यो। नजुझी निराकरण प्राप्त गर्न सकिंदैन। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। कतिन्जेल कोरोनाको डरले भविष्यको उज्यालो छेकिराख्ने, कतिन्जेल गाँसको अभाव सहिरहने, कतिन्जेल शिक्षाको पारिलो घामबाट वञ्चित भइरहने ? मूल कुरा हो समस्याबाट पार पाउनु। अहिले हामी जे गरिरहेका छौं, त्यो पार पाउने उपाय होइन, समस्या आफैं हराएर, बिलाएर जाओस् भन्ने सतर्कता मात्र हो। तर कोरोना अजिर समस्या हो, यसलाई धपाउनैपर्छ। लुकीबसेर आफैं भागोस् भन्ने कामना सर्वदा हास्यास्पद हो, बितेको ८ महीनाले देखाएको वास्तविकता यही हो। यसको पहिलो पाइला विद्यालयहरूले निश्चित गरेका छन्। वीरगंज महानगरपालिका अन्तर्गतका निजी विद्यालयहरूले यसै हप्तादेखि पठनपा
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ वीरगंज महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले महानगरले विद्यालय सञ्चालनको लागि लिखित अनुमति नदिएको बताएका छन्। उनले महानगरमा रहेका विद्यालयहरूको अवस्था अनुगमन गरी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्र विद्यालय सञ्चालनको स्वीकृति दिने बताएका छन्। प्याब्सन, पर्साले मौखिक सहमति भएर कक्षा ८ देखि १० सम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको भन्ने समाचार प्रकाशनमा आएपछि नगरप्रमुख सरावगीले महानगरले त्यस्तो सहमति नदिएको प्रस्ट्याएका हुन्। उनले आइतवार अथवा सोमवार नेपाल शिक्षक महासङ्घ, प्याब्सन, एन–प्याब्सन, अभिभावक सङ्घलगायत सरोकारवालाहरूको भेला गरी परामर्श लिएर मात्र विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा निर्णय गर्ने बताए। सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूको अनुगमन गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा भए, नभएको बारे बुझेर मात्र आंशिक सञ्चालनको स्वीकृति दिन सकिने उनले बताए। इन्टरनेटमा पहुँच भएका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन सेवा प्रदान गर्न र इन्टरनेटमा पहुँच नभएकाहरूलाई मात्र विद्यालयमा अध्यापनको व्यवस्था मिलाउने उनले बताए। निजी विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था साँघुरो भएकोले पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने ब
प्रस, सेढवा, १४ कात्तिक/ पर्साको ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरू निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले समस्या भोग्नुपरेको छ। वर्षायाममा हिलाम्य हुने गरेको सडकखण्डहरू अहिले धूलोको कारण समस्या भएको हो। हुलाकी, थरूहट, वीरगंज–ठोरी सडकखण्ड अहिले धूलाम्य भएको छ। जीराभवानी गाउँपालिका–२ सेढवाका अतुलकुमार उपाध्यायले सडकमा धूलोको कारण सवारीसाधनहरूका साथै पैदल हिंड्ने क्रममा पनि समस्या भोग्नुपरेको बताए। दैनिक यात्रीवाहक बस, ट्रक, टिपर, ट्याक्टर, साइकल, मोटरसाइकलको आवागमन हुने यी सडकखण्डमा निर्माण कार्य कछुवा गतिमा भएको कारण ढिलाइ भएको छ। निर्माणको क्रममा धूलो उड्न नदिन पानी छर्ने ट्याङ्की ठेकेदारसँग भएपनि सोको उपयोग गरिएको छैन। जनताले विरोध गरेको खण्डमा मात्र स्थानीय पालिकाले ठेकेदारलाई पानी छर्न दबाब दिने गरेको छ। अहिले दबाब नदिएको कारण धूलाम्य सडकमा ठेकेदारले पानी छर्ने गरेको छैन। ठोरी गाउँपालिका–४ निर्मलबस्तीका भक्तबहादुर श्रेष्ठले वीरगंज आउजाउ गर्दा सडक धूलाम्य हुँदा समस्या हुने गरेको बताए।
प्रस, निजगढ, १४ कार्तिक/ बारा, निजगढ नगरपालिकाको निजगढ र भरतगंजसिगौलमा गरी १२ सय बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा स्थानीय कृषकहरूले केरा उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। डेढ दशकअघि दुई/चारजना किसानले व्यावसायिकरूपमा शुरू गरेको केराखेती अहिलेसम्म एक हजारभन्दा बढी कृषकले गरिरहेका छन्। यसअघि यहाँका किसानहरूले समयमैं उखु मिलमा बिक्री गरे पनि भुक्तानी लिन वर्षौं कुर्नुपर्ने, हैरानी खेप्नुपर्ने मात्रै हैन, सडक सङ्घर्ष नै गर्नुपर्ने भएपछि उखुखेतीको विकल्पमा केराखेती रोजेका हुन्। “आफ्नो लगानीमा उखु लगायो। दिनरात नभनी उखु मिलमा पठायो। भुक्तानी लिने बेला मिलले सा–है हैरानी दिने गरेकोले निजगढमा उखुबाली लगाउन छोडी किसानहरू केराखेती गर्न थालेका हुन्,” स्थानीय अग्रज किसानहरू बताउँछन्। खेतबारीमैं एक हातले केरा दिएर अर्को हातमा व्यापारीहरूले भुक्तानी दिने गरेपछि अधिकांश किसानको रोजाइ व्यावसायिक केराखेतीतर्फ सोझिएको हो। अन्य समयमा प्रतिकोसा ३–५ रुपैयाँसम्म खेतबारीमैं केरा बिक्री गर्ने किसानहरूले विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण लकडाउनको अवधिमा घाटा सहनुप–यो। लकडाउन खुलेलगत्तै केराको मूल्
भेडाहा खोला टेन्डरमा अनियमितता गरिएको पुष्टि
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ वीरगंज महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा भेडाहा खोलाको टेन्डर गर्न खोजेको तर सो रोकिएपछि महानगरलाई १ करोड फाइदा भएको छ। गिट्टी, बालुवा उत्खननको लागि यस आवमा महानगरले गोप्य सूचना प्रकाशित गरेर न्यूनतम मूल्य ३८ लाख १० हजार तोकी ४१ लाखमा दिने प्रपञ्च रचिएको थियो। तर सो कुराको यस दैनिकले खुलासा गरेपछि गोप्य टेन्डर प्रक्रिया रोकिएको थियो। अहिले महानगरले सोही खोलाको सार्वजनिकरूपमा टेन्डर आह्वान गर्दा रु १ करोड ४५ लाख ९ सयमा टेन्डर सकार भएको छ। नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले गोप्य टेन्डर आफ्नो आदेशमा रद्द गरेका थिए। कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सो घटना भएपनि यसबारेमा छानबीन गरिएको छैन। महानगरले गत आव २०७६/७७ मा सो खोलाको टेन्डर तीन महीनाका लागि रु ९१ लाख र आव २०७५/२०७६ मा एक वर्षको लागि रु १ करोड ४५ लाखमा गरेको थियो। नगरप्रमुख सरावगीसहित महानगरका कर्मचारीहरू कोरोना सङ्क्रमित भएर आइसोलेट भएको अवस्थामा महानगरका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा भेडाहा खोलाको टेन्डर कम मूल्यमा दिने प्रपञ्च रचिएको थियो।
बारा घटनाको छानबीन समिति गठन
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराले बुधवार राति सुवर्ण गाउँपालिका–२ मा घटित घटना सम्बन्धमा छानबीन गर्नको लागि प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबीन समिति गठन गरेको छ। बुधवार राति तीनवटा मोटरसाइकलमा भारतबाट भिœयाइएको सात बोरा प्याज प्रहरीले बरामद गरी इलाका प्रहरी कार्यालय कबहीगोठमा राखेको र सो प्याजलाई राति जिप्रका बारा ल्याउने क्रममा स्थानीयले अवरोध गर्दा झडप भएको घटनामा तीनजना प्रहरीसहित एकजना १४ वर्षीय नाबालक रञ्जनकुमार यादव प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएको सम्बन्धमा छानबीन समिति गठन भएको हो। जनता समाजवादी पार्टी बाराले बिहीवार कलैयामा प्रदर्शन गर्दै घटनाको छानबीन गर्न माग गरेको थियो। १४ वर्षीय यादव टाउकोमा गोली लागी गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको नारायणी वयोधा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्थानीयले प्रहरीको सवारीसाधन तोडफोड गर्नुका साथै प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दा तीनजना प्रहरी घाइते भएको बारा प्रहरीको भनाइ छ। समितिलाई छानबीन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय प्रदान गरिएको छ।
४१ जनाद्वारा रक्तदान
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ स्वतन्त्र समाज नेपाल वीरगंज–२२ जगरनाथपुरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा ४१ जनाले रक्तदान गरेका छन्। नेरा आधारभूत विद्यालयमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा दीपेन्द्र साह, मोबारक मियाँ, अशोक यादव, प्रमोद कुशवाहा, श्रीरामप्रसाद यादव, बबलु पटेल, अमित रञ्जन, दिलीप साह, अरुण महतो, विशाल शर्मालगायतले रक्तदान गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्राविधिक प्रमुख सौरभराज पाण्डेले बताए।
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ वीरगंज महानगर–५ कुम्हालटोल निवासी यादवप्रसाद उपाध्यायको निधन भएको छ। भाजुरत्न इन्जिनीयरिङ एन्ड सेल्स लि.का पूर्वमहाप्रबन्धक उपाध्यायको बिहीवार राति नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। पछिल्लो समयमा उनलाई कोरोना सङ्क्रमणको लक्षण देखिएको थियो। घरमैं आइसोलेट भएका यादवलाई समस्या भएपछि नेशनल मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको र उपचारको क्रममा निधन भएको वडाध्यक्ष प्रदीप चौरसियाले बताए। उनको आज अशोक वाटिकास्थित श्मशानघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ।
ठूलो परिमाणमा चल्ला बरामद
प्रस, पोखरिया, १४ कात्तिक/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका–३ बाट चल्ला बरामद गरेको छ। तीनवटा भारतीय नम्बरका मोटरसाइकलमा भारतबाट अवैध तरीकाले भिœयाइएको चल्ला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिप्रका, पर्साले जनाएको छ। मोटरसाइकल चालकहरू भने भाग्न सफल भएका थिए। सोही क्रममा प्रहरीले फरार भएका चालकलाई पछ्याउने क्रममा वीरगंज महानगर–५ बाट खाली मिनी ट्रक, पिकअप भ्यानसहित दुईजना चालक, एकजना सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। चितवन जिल्ला, कालिका नगरपालिका–६ बस्ने २४ वर्षीय चालक सुवर्ण कुम्हालले उक्त चल्ला चितवनबाट ल्याएको भनी बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले ३२ हजार ६ सय चल्ला बरामद गरेको छ। प्रहरीले चालक रामकृष्ण नेपाली र सहचालक कृष्ण नेपालीलाई पनि पक्राउ गरेको जनाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्ति, गाडी र चल्लालाई आवश्यक कारबाईको लागि जिल्ला पशु क्वारेन्टाइन श्रीसिया पठाएको जिप्रका, पर्साले जनाएको छ।
गण्डकद्वारा सेमरबारी बर्वा पराजित
प्रस, पर्सागढी, १४ कात्तिक/ नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रवार भएको खेलमा गण्डक क्रिकेट टीमले सेमरबारी बर्वा क्रिकेट टीमलाई ४३ रन अन्तरले पराजित गरेको छ। पर्सागढी नगरपालिका–४ स्थित नेरामावि बर्वाछोटैली खेलमैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको गण्डक क्रिकेट टीमले ९ विकेट गुमाइ ९५ रन बनाएको थियो। प्रतिउत्तरमा सेमरबारी बर्वा क्रिकेट टीम ९ विकेट गुमाउँदै ५२ रनमा सीमित भयो। खेलमा ‘म्याद अफ दि म्याच’ गण्डकका समीर अन्सारी घोषित भए। उनले २१ बलमा ३२ रन बनाएको आयोजक युथ क्लब बर्वाछोटैलीका अध्यक्ष आलोक सिंहले जानकारी दिए।
प्रस, रौतहट, १४ कात्तिक/ कटहरिया नगरपालिका–१ खोर टोलस्थित गर्जा नदीको पुलनजीकैबाट सालका दुईवटा गोलिया बरामद भएको छ। जङ्गलबाट काठको गोलिया मोटरसाइकलमा लोड गरेर ल्याइरहेको अवस्थामा वनगस्ती टोलीलाई देखेपछि तस्करले गोलिया फालेर भागेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद सालको गोलिया अस्थायी प्रहरी पोस्ट छेदीचोकमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
तेली समाजको शुभकामना कार्यक्रम
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ तेली समाज नेपाल, पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका कमिटीले शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। गाउँसमितिका अध्यक्ष शिवकुमार साहको अध्यक्षता तथा विश्वनाथ साहको प्रमुख आतिथ्यमा दशैं, दीपावली, छठ पर्वको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वर साह तेली, तेली समाजका केन्द्रीय सदस्य गणेश साह, जिल्ला अध्यक्ष धु्रव साह, दिनानाथ साह, असर्फी साह, लक्ष्मण साह, रामनाथ साह, पन्नालाल साहलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्नेहरूले तेली समाजबाट दाइजोप्रथा हटाउन सहभागीहरूलाई आग्रह गरे। उनीहरूले बालबालिकालाई शिक्षामा सहभागिता गराइ समाजबाट दाइजोप्रथा हटाउन सबैमा आग्रह गरे।
भागवत चौधरीको श्रद्धाञ्जलिसभा
प्रस, बिरुवागुठी, १४ कात्तिक/ नेपाली काङ्ग्रेस बागवानाका पूर्वसभापति भागवत चौधरीको १३औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा बिहीवार साँझ श्रद्धाञ्जलिसभा सम्पन्न भयो। नेका केन्द्रीय सदस्य अजयकुमार चौरसियाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र चौधरी, प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वरप्रसाद साह, नेका पर्सा सभापति अजय द्विवेदी, डा कृपासिन्धु चौधरी, थारू कल्याणकारीसभाका अध्यक्ष ठाकुर महतो थारू, सचिव भागवत चौधरी, बृजमोहन चौधरी, जङ्गबहादुर चौधरीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस पर्सागढी कार्यसमितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता मेवाचन्द चौधरी र सहजीकरण वडाध्यक्ष वेदमन दास थारूले गरेका थिए।
चौरसियाको अन्तिम संस्कार
प्रस, पर्सागढी, १४ कात्तिक/ विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका–५ निवासी मुकेश चौरसियाको हत्या भएको ८ दिनपछि शुक्रवार अन्तिम संस्कार गरिएको छ। हत्यामा संलग्न १२ जनाविरुद्ध बिहीवार मुद्दा दायर भएपछि आज शल्यपरीक्षण गरी परिवारले शव बुझेका हुन्। उनको विन्ध्यवासिनी गापा–५ बहुअर्वास्थित ढोंगही खोलामा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। अन्तिम संस्कारमा नेकपाका नेता, कार्यकर्ताहरू सहभागी थिए।
अवैध चिरान काठ नियन्त्रणमा
प्रस, निजगढ, १४ कात्तिक/ निजगढ नगरपालिका–२ भरतगंजसिंगौलबाट प्रहरीले २ लाख १५ हजार मूल्यबराबरको अवैध चिरान काठ शुक्रवार नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीय तीर्थलाल ठोकरको घरमा लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा ५९ थान सालको चिरान काठ नियन्त्रणमा लिएको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी निरीक्षक विकास थपलियाको टोलीले बिहान करीब ५ बजे ५० क्यूफिट चिरान काठ नियन्त्रणमा लिई वन कार्यालयलाई बुझाएको वन अधिकृत एवं डिएफओ मन्जुर अहमदले जानकारी दिए। बरामद काठको बारे अनुसन्धान गरी संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिने डिएफओ अहमदले बताए। सो काठ सबडिभिजन वन कार्यालय निजगढमा राखिएको छ।
रातो टीका निधारमा...
मुकुन्द आचार्य कसै–कसैले भन्छन्, हेर त यो संसार कति सुन्दर छ ! प्रकृतिको सौन्दर्य हेर। कतै विशाल पहाडहरू छन्। कतै डरलाग्दा समुद्रहरू छन्। कतै अनकन्टार वन। कतै बालुवाको खानी रेगिस्तान छ। सुन्दर चराचुरुङ्गी पनि कतै छन् भने डरलाग्दा भयानक नरभक्षी पनि यहीं छन्। तर आजको मान्छे यस्तै सौन्दर्यमा भुल्न चाहन्न। मानवको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो, ऊ पनि चराझैं उड्न र गाउन चाहन्छ। आफूलाई सुरक्षित जोनमा राखेर ऊ नरभक्षी हिंसकलाई नजीकबाट नियाल्न खोज्छ। आहा, पाटेबाघ पनि कति चित्ताकर्षक देखिन्छ। टिभीमा हेर्नुस् त कोरोनाका कातिल कीटाणु पनि कति कमालका देखिन्छन्। हेरिरहुँजस्ता! अनि त रातो टीका निधारमा टलक्क टल्कियो, नेपालीको चाडबाडमा कोरोना सल्कियो ! यस्तै विरहको गीत सुसेलेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा हामी बाँचिरहेका हुन्छौं। नभन्दै यसपालाको दशैं खल्लोमल्लो नै भयो। खोई कहाँ छ, उमङ्ग–उत्साह–खुशी ? आफ्नै सहोदर दाजुभाइ एकअर्कालाई भेट्न डराउँछन्। आउने–जाने दाजुभाइले कोरोनाको कोसेली पो बोकेर ल्याएका छन् कि ? त्रास र अत्यासको अँध्यारोमा हामी बाँच्न बाध्य छौं, हिंड्न बाध्य छौं। अनि रमाइलो घमाइलो कहाँबाट ल्
सञ्जय मित्र दशैं नेपालीको मुख्य पर्व हो। नेपाली भन्नाले नेपालको नक्शाभित्र अटाएका सम्पूर्ण नागरिक हुन्। देशका अन्य धर्मावलम्बीहरू आआफ्नो संस्कृति मान्दछन्। यस देशको सांस्कृतिक विशेषता नै हो कि सबैको संस्कृतिको सम्मान सबैले गर्दछन्। चाडपर्वको नाउँमा देशमा दिइने बिदाको सूचीमा दशैंको बिदा सबैभन्दा लामो हुन्छ र यस लामो बिदाको उपयोग धेरै किसिमले सबै धर्मावलम्बीले गर्दछन्। दशैं मान्ने संस्कृतिभन्दा पृथक संस्कृतिका मानिसले पनि यसलाई सम्मान गर्दछन्। यसरी सम्मानका दृष्टिले समेत हेर्ने हो भने दशैं सम्पूर्ण नेपालीको साझा पर्व हो भन्ने कुरामा द्विविधा छैन। दशैंलाई विभिन्न समुदायले फरक किसिमले मान्ने गरेको पाइन्छ। मधेसी समुदायले पनि आफ्नै किसिमले दशैं मान्ने संस्कृति रहेको छ। पहिलेदेखि नै दशैंको अवधिमा मधेसी समुदायले मुख्यगरी नवरात्रिको पूजाआजा गर्दै आएका थिए। शिक्षा र चेतनाका साथै रोजगारको क्रममा देशको विभिन्न ठाउँमा जाँदा र आउँदा तथा अन्य किसिमले सम्पर्क विस्तार गर्दै जाँदा पहाडमा मनाइने दशैंसित घुलमिल हुँदै गएको हो। पहाड र मधेसको दशैं मान्ने तरीकामा केही आधारभूत भिन्नता रहँदै आएको छ।
२०७७ कात्तिक १४ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
किसानमैत्री घोषणामा मात्र
हाम्रो देश कृषिप्रधान भएकोले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले किसान लक्षित बजेट बनाउने गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर वास्तविकतामा बजेट किसान लक्षित हुँदैन भन्ने दृष्टान्त पनि बर्सेनि किसानले भोग्दै आएका छन् । पर्सा जिल्लाकै मात्र उदाहरण लिने हो भने असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा १४ वटै पालिकाले किसानमैत्री कार्यक्रमहरू गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । त्यसपछि साउन मसान्तसम्म बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा पनि पालिकाहरूले किसानमैत्री बजेट ल्याएको दाबी गरे । तर यथार्थमा पालिकाले घोषणा गरेको किसानमैत्री बजेट किसान लक्षित नभएको एकपछि अर्काे घटित घटनाले पुष्टि गरेको छ । पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधि खेतीपातीसँग जोडिएका छन् । उनीहरूलाई खेती गर्दा आइपर्ने समस्या र सोको समाधानका उपायबारे पनि अनुभव नभएको होइन । तर एउटा किसानको रूपमा सोच्नुभन्दा नेताको रूपमा सोच राख्दा समस्या भएको हो । किसानलाई कुन बखत कुन बीउबिजनको आवश्यकता पर्छ । र सो अनुरूपको तयारी कसरी गर्दा किसानहरूको उत्पादन वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञानलाई जनप्रतिनिधिहरूले व्यवहारमा उतार्न नस
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ वीरगंज महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले बिहीवारदेखि विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएपछि निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्। महानगरको शिक्षा महाशाखाले हिजो बुधवार वार्ताबाट आजदेखि कक्षा ८, ९ र १० सञ्चालन गर्न मौखिक अनुमति दिएको प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष डा हरिशङ्कर साहले बताए। उनले महानगरको स्वीकृतिपछि बिहीवारदेखि निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएको जानकारी गराएका छन्। तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै कक्षा ८, ९ र १० सञ्चालनमा आएको उनले बताए। नेपाल शिक्षक महासङ्घ वीरगंज महानगरले भने सामुदायिक विद्यालयहरू आजदेखि सञ्चालन गर्न असमर्थता जनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरू विसङ्क्रमित गर्न बाँकी रहेकाले विसङ्क्रमित गरेर मात्र विद्यालय सञ्चालन हुने महासङ्घले जनाएको छ। निजी विद्यालयहरूमा पनि कक्षा ८ देखि १० सम्मको अध्ययन आगामी आइतवारदेखि नियमित हुने प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष डा साहले बताए। उनले आजदेखि केही विद्यालय सञ्चालनमा आएको र आइतवारदेखि कक्षा ८ देखि १० सम्मका सबै विद्यालयमा अध्यापन शुरू हुने बताए। यसअघि, विद्यालय सञ्चालनको लागि प्याब्सन, एन–प्याब्सनले आयोज
चौरसिया हत्या प्रकरणः एक हप्तापछि मुद्दा दर्ता
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ मुकेश चौरसियाको हत्या भएको एक हप्तापछि प्रहरीले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रवक्ता मनोजीत कुँवरले १२ जनाविरुद्ध परेको कर्तव्य ज्यानको जाहेरी मुद्दा दर्ता भएको बताए। कात्तिक ६ गते विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा नेकपाका दुई पक्ष्Fबीच भएको झडपमा सोही गापाका नेकपा सचिव मुकेश चौरसिया घाइते भई भोलिपल्ट उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। मृत्युपश्चात् प्रहरीमा दिइएको किटानी जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले बिहीवारसम्म दर्ता गरेको थिएन। आज पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सामा जाहेरी दर्ताको माग गर्दै धर्ना दिइएको थियो। किटानी जाहेरीका लागि सात दिनदेखि निरन्तर धर्ना दिइएको थियो। यसैबीच, बुधवारदेखि जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि नेकपाका नेता, कार्यकर्ताहरूले जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई उजूरी दर्ताको लागि आग्रह गरेको र न्यायाधिवक्ताले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जाहेरी दर्ता गर्न अनुरोध गरेपछि आज जाहेरी दर्ता भएको हो। घटना सम्बन्धमा प्रहरीले तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ। घटनाल